Ibrahimovic oo ugu dambeyn u muuqda mid sal dhigtay…Balse waxaa DAAHA laga rogay sababtii uu uga guuray Hotel-ka United jeceshay ee Lowry! - Gool FM	twitter
Ibrahimovic oo ugu dambeyn u muuqda mid sal dhigtay…Balse waxaa DAAHA laga rogay sababtii uu uga guuray Hotel-ka United jeceshay ee Lowry!
(Manchester) 31 Luulyo 2016. Kaddib markii ay qaab wanaagsaneyn ugu bilaabatay noloshiisa cusub ee England, axwaasha hada ugu dambeyn waxa ay u muuqdaan in ay u yara qaboobeen Xiddiga Manchester United, Zlatan Ibrahimovic.
Laacibka u dhashay Sweden waxa uu ku sugan yahay England kaddib markii uu bilaash ugu soo biiray Red Devils, waxa uu toddobaadkii tagay Carrington kula kulmay saaxiibadiisa cusub.
Ibrahimovic waxa uu dalxiiskiisa ku qaadanayey USA halka United ay kulamo diyaar garaw u joogtay China.
Laakiin 34 jirka waxa uu u muuqday mid jah wareeray kaddib markii isaga, xaaskiisa Helena Seger iyo labadiisa caruur ay soo gaareen Hotel Lowrey oo ay adeegsato kooxda.
Qoyska waxa ay ku sugnaayeen Hotel-ka dhawr saacadood deedna waxa ay u guureen dhisme kale.
Xiddiga meesha uu u guuray waxa ay Lowry u jirtaa meel gaariga u socdo shan daqiiqo waana Hotel-ka Five Star-ka ah ee Radisson Blu, sababta uu u wareegay waxaa lagu sheegay in Waasto la’aanta Hotel-ka ay ka carreysiisay Zlatan.
Laakiin waxa uu Ibrahimovic u muuqday mid xasiloon mar la arkay isaga oo ka baxaya Hotel-ka toddobaadkan.
Ibrahimovic waxaa gaari u taagnaa banaanka uu geeyey goobta tababarka ee Carrington waxa uuna diyaar garaw ugu jiraa sidii uu heegan ugu ahaan lahaa kulanka Community Shield-ka ee 7-da Agoosto United la dheeli doonto Leicester City.
Weeraryahanka waxa uu helayaa taageero weyn madaama ay saaxiibo badan iyo qoyskiisa qaar ka mida ay yimaadeen Manchester.
Taageereyaasha iyaguna waxa ay sugayaan in ay arkaan qorshaha Jose Mourinho in Ibrahimovic uu ka noqdo mid mug weyn xilli ciyaareedka dambe, Jose waxa ay u muuqataa in uu adeegsan doono kaartada ah 4-3-3.
Ibrahimovic afar daqiiqo ayey ku qaadatay in uu goolkiisa ugu horreeya u dhaliyo xalay kulankii ay 5-2 ku garaaceen Galatasaray ciyaar saaxiibtinimo oo ku dhexmartay Sweden.